विश्वको सब भन्दा महँगो हीरा कुन हो? लिलामी ईतिहास बनाउने खजानाहरूमा हेर्नुहोस्
१-0-०9-२०१ admin मा प्रशासक द्वारा
संसारमा सब भन्दा महँगो हीरा के हो? जब मान निर्धारण गर्न असम्भव छ, हामी लिलामीको इतिहासमा सब भन्दा महँगो र सबैभन्दा महँगो हीराको माध्यमबाट हीराको घण्टीको मूल्य झलक हेर्न सक्छौं। यसले au को इतिहासमा एक ऐतिहासिक हीराको घण्टी बनायो ...
१-0-०7-०२ मा व्यवस्थापक द्वारा
कृत्रिम तवरले उत्पादन गरिएको हीरा १ 50 s० को दशकमा देखा पर्‍यो। यद्यपि हालसालै, हीराको खेती गर्ने उत्पादन लागत खानीको हीराको लागत भन्दा उल्लेखनीय रूपमा कम हुन थाल्यो। पछिल्लो वैज्ञानिक र प्राविधिक प्रगतिहरूले निर्माण लागतलाई धेरै ह्रास गरेको छ ...
१-0-०6-२० मा प्रशासक द्वारा
जब वसन्त फेस्टिवल आउँदैछ, TA लाई के पठाइनेछ उनको खुशीमा उनको आँखामा हाँसोको लागि? Lingling बताउँछ कि एक रत्न गहना पर्याप्त छ। बिभिन्न गहनाको अर्थ बिभिन्न प्रेम गोप्य शब्दहरुलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। के तपाईं भन्न सक्नुहुन्छ कि टीएले सही अनुमान लगाउन सक्छ कि? हार - प्रेम डब्ल्यू ...
रत्नले वास्तवमै यी गोप्य शब्दहरू लुकाइन् कि उनीले यो अनुमान गर्न सक्छिन्?
१-0-०4-१-15 मा प्रशासक द्वारा